Isimo sisemanzonzo e-Thornville | News24
Isimo sisemanzonzo e-Thornville
ISITHOMBE: LETHIWE MAKHANYAAmaphoyisa ophiko lwe-Public Order Policing ezama ukuvula umgwaqo ngoLwesine.
ISIMO sisemanzonzo endaweni-yase-Thornville kulandela ukuthi umphakathi wakule ndawo uvuke umbhejazane wavala umgwaqo u-R56 ngamathayi avuthayo, amabhodlela kanye namatshe ngoLwesine kanye noLwesihlanu olwedlule.
Lokhu kulandela ngemuva kokuba inkampani ephakela ngogesi u-Eskom ugasele kulendawo ngoLwesine wanquma izigxobo zikagesi kanye nezintambo okuxhunywe ngokungekho emthethweni.
Amalunga omphakathi abe esevuka umbhejazane avala umgwaqo kwama yonke into kulendawo njengoba bekuvalwe umgwaqo u-R56 kungadluli lutho, kwaze kwasiza amaphoyisa ophiko lwe-Public Order Policing (POP) ngokuthi ahlakaze isixuku ngezinhlanvu zenjeloba.
Lo mphakathi ukhala ngokuthi awuzange unikezwe isexwayiso ngokukhishwa kwezintambo zikagesi, kodwa babone ngoba sekugwcele amaphoyisa ehambisana nabantu baka-Eskom sekuzonqunywa izigxobo.
Lo mphakathi uthe ngaphambi kokuba kufike abantu abazocisha ugesi waqala wahamba ngezikhathi zasekuseni kodwa banganaka bazitshela ukuthi kusaqhubeka uhlelo lokucishwa kukagesi(load shedding).
“Sineminyaka silindele u-Eskom ukuthi uzosifakela ugesi kodwa lutho asitholanga ngisho impendulo ingako saze sathatha isinqumo sokuthi sizifakele thina ugesi kodwa izigubhu sazithenga kubona ngoba siyawuthenga phela ugesi. Bekumele basitshele nje basinikeze nesexwayiso. Manje bathi ukudla kwethu loku kwe zitokfela okugcwele iziqandisi bathi kona sikwenzenjani ngempela? Sasifaka thina isicelo sikagesi kwaba ibona abafeyilayo ukuzowufaka. Akusikona ukuthi siyanqaba ukukhokhela ugesi sizowukhokhela ingako safaka isicelo kubona ukuthi sicela basifakele ugesi,” kusho elinye ilunge lomphakathi .
Elinye ilunga lomphakathi elingathandanga ukuba igama lalo lidalulwe, litshele i-Echo ukuthi emasontweni amabili edlule kuke kwaba khona umhlangano nalapho kuvunyelwane khona ukuthi angeke uze usacishwa ugesi kodwa kuzolethwa inkampani ezofika izofaka kahle ugesi.
“Inkampani ibizofika ikhiphe leyondawo bese ifaka kabusha ugesi ngendlela okuyiyona ukuze singeke siphazamiseke kakhulu. Manje njengoba [besinqamulela ugesi] beqeda beshiya kanje bathi thina asenze njani ngempela? Angeke thina sikwazi ukudla uKhisimusi ebumnyameni. Uma kungukuthi ababuyi ukuzolungisa basixhumele ugesi ngendlela eyiyona sizoqala phansi sizifakele thina futhi ugesi angeke nje size sidlale bona,” kusho elinye ilunga lomphakathi.
Lo mphakathi uvumile ukuthi wazifakele wona ugesi ngokungekho emthethweni kodwa bathi bakwenza loku ngoba besekuphele isikhathi eside u-Eskom engasiphenduli isicelo sabo sokucela ukufakelwa ugesi.
Okhulumela amaphoyisa eMgungundlovu u-Sergeant Mthokozisi Ngobese uthe amaphoyisa ayiqaphile leyandawo ukuze kungabi khona ukuphazamiseka futhi kulandela isiteleka sezinsuku e zimbili.
“Sinamaphoyisa ahlukene aqaphe isimo okubalwa kuwona nawaka-POP enza isiqiniseko sokuthi akukho ukuphazamiseka okanye udlame oluqhubekayo,” kubeka yena.